TOMATO "DUBRAVA" (OAK): DABEECADAHA, BEERASHADA IYO SHARAXAADDA NOOCYADA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Tilmaamyada tamaandhaynta "Dubrava" ee dacha
Ka mid ah noocyada kala duwan ee yaanyada on suuqa maanta, bannaanka u isku dayayaan in ay doortaan kuwa aan qabyo ahayn marka koray beerta furan, uma baahna garter iyo pasynkovaniya. Dhammaan faa'iidooyinkaasi waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo yaanyo ah.
Tomato Dubrava: sharaxaad kala duwan
Noocani noocan ah wuxuu leeyahay dherer dhererkiisu kooban yahay - ma korin karo in ka badan 70 cm dhererka. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay laanta yar yar, laakiin caleenta caleenta ah oo cufan ayaa daboolaya baadiyaha oo dhan.
Midhaha warshadu waxay korodhaa celcelis ahaan, waxayna gaareen ilaa 110 g, in kasta oo beerta ku andacoonayaan in xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo ay sii kori karaan. Dib u cagaarka muuqaalka, waxay leeyihiin derbi culus oo cufan iyo tiro aad u yar. Sidaa darteed, waxay si siman ubaahan yihiin labadaba isticmaalka cusub iyo wax soo saarka.
Yaanyada Miro waxaa ku jira sharaxaad soo socota: oo ah wareegto yar, yar yar, xitaa qaab, waxay leeyihiin foorisho yar-yar, waxoogaa hoos u dhigaya dhinacyada.
Kala duwan waxaa lagu qiimeeyaa Bisaylkiisa hore iyo dhalidda sare. Xaaladdan, daryeelka isaga u baahan yahay ugu yaraan. Warshadu waxay u adkaysatay cudurada viral, dhaxan. Burbur geedeedka waa la kori karaa xitaa daaqadaha guriga.
Waxaa la og yahay in noocyada ugu badan ee yaanyo aad u dalbanaya heerka qoyaanka. Dib udhaca yar ee xaaladaha ku habboon waxay yeelan karaan cawaaqib xun, laakiin maahan kiiskan.
Tomato Dubok ayaa si fiican u kordhay gobollada waqooyiga iyo koonfurta, oo leh sifooyin aad u fiican. Wakhtiga kaliya waa in inta lagu jiro muddada ubax iyo pollination wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo heerkul aan ka sareeyo 25 ° C.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka yaanyo Dubok (Dubrava)
Faa'iidada ugu muhiimsan ee kala duwanaanshahan waa fudayd oo aad u adag oo daryeel iyo dhalid sare. Waa ku filan in la waraabiyo geedka laba jeer, sida baadiyaha u baxda waxay bilaabaan inay ku daadiyaan haramaha, nasiibkana ka ilaalinaya ninkii beerta ka shaqaynayay si uu u sii kobciyo ciidda.
Tamaandho ah ee kala duwan Dubrava u bislaadaan ugu badnaan maalinta 110aad ka dib biqilka ee abuur abuur, taas oo ka dhigaysa suurtagal ah in lagu kala saaro kala duwan sida hore u-bislaaday. Warshadu waxay u adkeysan kartaa isbeddel deg-deg ah heerkulka, qaboojinta. Waxay u adkaysatay cudurrada ugu badan, gaar ahaan diidmo xun.
Waxaad ku kori kartaa iyada oo aan lahayn maqnaansho gaar ah iyo qanjaruufo. Isla mar ahaantaana, waxay muujinaysaa dhalidda sare - illaa 5 kg dalagga ayaa laga goyn karaa halkii mitir labajibbaaran.
Waxaa ka mid ah faa'iido darrada waxaa loo yaqaannaa mid aad u tiro badan oo khudrad ah oo aan ku habboonayn caanaha. Xitaa lama gooyo, laakiin bangiyada qoortooda ma joogsadaan.
Ma taqaanaa? Kala duwan ee yaanyada Dubok waa mid ka mid ah dhawrka maanta oo la soo saari karo iyadoo la uruurinayo abuurkaaga. Xaaladaha intooda badan, beerista noocyo kale ka dib markii biqilka abuurka ah si ay u hesho tamaandhooyinka leh sifooyinka hooyada waa wax aan macquul ahayn.
Sida loo koro geedo, beerashada Dubrava
Sida kiiska noocyo kale, abuurka abuurka ah ee dhulka u furan ma noqon doonaa ku habboon beerashada warshad. Yaanyada cagaaran waxay u baahan yihiin beeritaanka geedo, kuwaas oo markaa lagu beeray gudaha dibedda.
Wixii beerto abuurka yaanyo kala duwan, waxaad isticmaali kartaa walxo gaar ah oo lagu iibsado dukaanka. Laakiin waxaad isticmaali kartaa dusha sare ee laga heli karo beerashada dhir, dill, zucchini.
Wax kasta oo aad doorato, Waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo ama la qariyo dhulka ka hor inta laga beeri si loo nadiifiyo.
Waqtiga lagu beero abuurka
Sida caadiga ah, abuurka geedo lagu beeray tobankii sano ee la soo dhaafay ee March. Hase ahaatee, waa inaad tixgelisaa waxyaabaha gaarka ah ee cimiladaada: gobollada diiran waxaad horay u beeran kartaa, iyo gobollada qabooba - dambe.
Seeds lagu beeray ciidda, lagu rido weelasha caagagga. Hubi in mid kasta oo ka mid ah uu leeyahay god yar oo hoose, kaas oo bixin doona dheecaan wanaagsan markaad waraabinaysid sprouts mustaqbalka.
Diyaarinta abuurka iyo qorsheynta abuurka ee kala duwan ee yaanyo Dubrava
Ka hor inta beerto abuurka waa in la diyaariyaa. Haddii la rabo, waxaad ku daaweyn kartaa kicinta kicinta kicinta, laakiin waa lagama maarmaan in lagu rusheeyo xal 2% oo ah kiniinka potassium. Ka dib markii la beero, waxay u soo baxaan wax kasta oo ku dhow.
Caleemaha yar yar ayaa marka hore la buufiyaa oo aan la waraabin si aysan u dhaawacmin. Marka geedo ay gaarto laba bilood jir, waxaad bilaabi kartaa adkeynta si loogu diyaar garoobo dhulka dhul furan. Si taas loo sameeyo, waxay ku qanacsan tahay heerkulka maalintii 17-18 ° C, iyo habeenkii - 12-13 ° C.
Ma taqaanaa? Tani noocyo kala duwan oo yaanyo ah ayaa laga soo qaatay qarnigii 21 aad. Cunnayaasha Siberian. Waxay rabeen inay soo saaraan noocyo udgoon oo u adkaysta in, xaaladaha hargabku, ay soo saari lahaayeen dalagyo wanaagsan oo ay caabuqi karaan. Oo iyana way ku guulaysteen!
Marka caleemaha waxay sameyn doonaan 3-5 caleemo, waxay awoodaan hoos u dhig waraaqo kala duwan ama weelasha. Markaas waxaa lagu talinayaa in iyaga bacrimiya iyaga oo leh hab gaar ah ee geedo, tusaale ahaan, Agricola. Isticmaalka marxaladaha kiciya kicinta kobcinta - Bacriminta humic waa mid la aqbali karo.
Sida loo beeray yaanyada dhulka u furan
Tomato Dubrava uma baahna beerto iyo daryeel gaar ah, waa inay ahaataa mid la mid ah noocyada kale ee yaanyada. Waxa kaliya ee aan lagu talineynin waa in la beero xayawaan aad u adag - aan ka badnayn lix geed oo halkii mitir labajibbaaran. Haddii kale, duurka ee dhirta ayaa dulmi doona midba midka kale, taasoo adkaynaysa koritaanka iyo yaraynta wax-soosaarka.
Inta kale Dubrava waxay u baahan tahay in la daboolo, quudiyo, weelka iyo waraabiyo biyo kulul. Weyn oo weyn ayaa ah in duurka ayan lahayn in la xiro, sidoo kale uma baahnid in aad ka saarto caleemaha dhinaca. Tani waxay aad u fududeyneysaa daryeelka isaga.
Marka la beeray karo geedo kala duwan Dubrava (Oak) ee dhulka u furan
Faleebo dhuleed oo furan ayaa la fuliyaa marka dhaxafka ugu dambeeya uu ka baxo. Muddadani, mudadani waxay dhacdaa dhammaadka Abriil iyo bilowga Maajo. Isla mar ahaantaana, geedo naftooda waa in ay ahaadaan ugu yaraan 55 maalmood jir ka biqilka.
For yaanyada of kala duwan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu go'doomiyo qaybta koonfureed ee beerta khudradda, laakiin waxay ku koraan karaa dhowr sano ee isdhexgalka, la siiyaa in ciidda waxaa la quudin leh Bacriminta organic tayo sare leh. Waxaa lagu talinayaa in basasha, qajaarka, kaabajka, iyo zucchini lagu beeray boggan ka hor Dubrava.
Waa muhiim! Haddii ciidda waa mid aad u acidic ah, waa lagama maarmaan in la diyaariyo beeritaanka noocyo kala duwan ee yaanyada xilliga dayrta. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku qodo goobta leh burka dolomite ama lime. Isla mar ahaantaana waxaad ku dari kartaa Bacriminta: 50 g of superphosphate iyo 8 kg of humus halkii mitir. Guga waxaad ku dari kartaa 20 g of potash iyo Bacriminta nitrogen.
Meelaha dhirta waxaa lagu qodaa fogaan ah 40-50 cm midba midka kale, masaafada u dhaxaysa safafka waa inay ahaataa 50-60 cm. Sida hore loo xusay, waa in aysan jirin wax ka badan lix godood mitir labajibbaaran oo digaagga ah si ay u helaan meel ay koraan. Tani waxay fududeyneysaa daryeelka iyaga iyo dhismahooda. Barkad kasta waa inay ka kooban tahay laba ama saddex afkoda.
Sida loo daryeelo Dubok (Dubrava) yaanyo kala duwan
Daryeelka yaanyo waa mid fudud. Intaa waxaa dheer, dhirta dhif ah waxaa ku dhicid laga bilaabo wakhti dambe. Laakiin waa inaad raacdaa xeerar aasaasi ah si aad u hesho dhalidda la filayo.
Maalin kasta, ma jirto baahi loo qabo in lagu waraabiyo dhirta, laakiin sidoo kale waa suurtogal in la oggolaado in si buuxda loo qalajiyo miyir beedka hareeraha baadiyaha. Sidaa darteed, mararka qaarkood waraabinta Dubrava weli waa la muujiyaa. Waa lagama maarmaan inaad tan sameyso ka dib qorrax dhaca oo si ballaaran ah.
Wakhti ahaan waa lagama maarmaan in la quudiyo geedka. Si tan loo sameeyo, isticmaal isku dar ah oo ka kooban ash alwaax (250 g), superphosphate (50 g), bacriminta organic (1: 5). In ciidda waxaa la sameeyaa hal mar in 20 maalmood. By this si joogto ah, aad si weyn u kordhin doona dhalidda ee yaanyada.
Waa muhiim! Noocyada Dubrava yaanyo, qoyaan xoogaa ka sarreeya ayaa ka fiican abaaraha joogtada ah. Si kastaba ha ahaatee, heerkul sarreeya ma saameynayo qiyaasta dhalidda. Waxa kale oo jiri doona wax badan oo miraha ah, laakiin waxay si weyn uga yaraan doonaan celceliska.
Tilmaamaha noocyada kala duwan waxay tahay in aysan u baahnayn wax soo saar. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u khibrad leh weli ku talinayaan in ay fuliyaan is-beddel this, abuuraya baadiyaha laba ama saddex afkoda.
Daryeelka dhulka (saarista cawska iyo mulching)
Daryeelidda warshad waxay ku lug leedahay jaridda dhirta. Run, waa inaad si taxadar leh u sameysaa hal mar ama laba jeer. Ka dibna baadiyaha xooggan naftooda ayaa daadi doona haramaha.
Xakamayn joogto ah ee ciidda ayaa lagula talinayaa. Tani waxay keenaysaa koritaanka nidaamka xididka, sii kordhaya koritaanka baadiyaha laftiisa iyo, si waafaqsan, kordhinta wax soo saarka.
Tomato Dubrava: Goynta
Xaabood waxay bixiyaan miro fiican oo miro leh inta lagu jiro Julaay - Agoosto. Haddii aad raacdo dhammaan xeerarka daryeelka iyaga, waxaad ka saari kartaa ilaa 7 kg oo yaanyo ah hal mitir labajibbaaran. Midhaha ugu horreysa waxay u bislaadaan maalinta 80-105aad ka dib marka la beerto, iyo kan dambe ayaa laga saari karaa xitaa dayrta goor dambe. Inta lagu jiro muddadan, miraha waxay u bislaadaan si tartiib tartiib ah, iyo beergooyska si joogto ah looga saari karaa.
Tamaandhada kala duwan ee noocan oo kale ah waxay leeyihiin acidity wacan, fareeshka, oo leh tiro yar oo ah abuur. Waxay si fudud u isticmaalaan saladhka, waxay cuneen cayriin. Waxay si fiican u socdaan oo ay dheer yihiin kuwo la iibsan karo ka dib marka laga saaro. Waxa kale oo si fiican u la qabsan karaa in la kariyo, salting, fadhiisin, qalajinta. Waxay ku jirtaa 6% maaddada qallalan, sidaas awgeed waxaa laga sameeyaa dareenka.
Tomato Dubrava waxay leedahay tiro ah sifooyin wanaagsan, oo ah midka ugu muhiimsan taas oo sahlan daryeelka, dhalidda sare iyo ilaalinta qaabka iyo dhadhanka leh kaydinta dheer. Sidaa darteed, bannaanka u sii kordhaya sariiro qorraxda koonfureed on sirqoolkooda, ururin dalag badan oo dhowr sano oo isku xigta.